Garoowe:-Madaxweyne ku-xigeenka Dawladda Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullahi Cumar Camey ayaa maanta 30 August 2017 magaalada Garoowe ka Daah-furay mashruuca xoojinta caafimaadka Puntland ee 2017-2019, waxaana mashruuca maalgeliyey Bangiga horumarinta Jamarlka.
Daahfurka Mashruucani balaadhan ayaa waxaa madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha Madaxweynaha ku weheli naayey masuuliyiin ka tirsan goloyaasha dawladda Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyadda Puntland, wefti uu hogaaminayo safiir ku-xigeenka dalka Jarmalka u fadhiga Soomaaliya Mr. Markus Bollmohr iyo hay’addaha hawl-waddeenka la ah Wasaaradda Caafimaadka Puntland.
Madaxweyne Ku-xigeenka Dawladda Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. C/xakiin Xaaji C/laahi Cumar Camey oo kahadlay daahfurka mashuucani ayaa sheegay in mashruucani yahay mid wax weyn ka taridoona hawlaha horumarineed ee caafimaadka Puntland, waxaana uu Madaxweyne ku-xigeenku sheegay in mashruucani isugu jiro hawlo caafimaad iyo dhismayaal ruggo caafimaad oo laga hirgelinayo labada gobol ee Mudug iyo Nugaal.